उफ गर्मी ! अघोषित लोडसेडिङले नेपालगन्जबासी सास्ती झेल्दै – Online Khojkhabar
३:५० मध्यान्ह, बैशाख ५, २०७९
बाँके बैशाख ५ गते ।
नेपालकै सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँको रुपमा नेपालगन्जको परिचय छ । यहाँको तापक्रम ४५ डिग्रीसम्म पुगेको छ । बैशाख महिना सुरु भएसँगै नेपालगन्जको तापक्रम हवात्तै बढेको छ ।
तापक्रम बढ्दा दिउँसोको समयमा बजारमा मानिसहरु निस्कन छाडेका छन् । सडकमा मानिसहरुको आवागमन पातलिएको छ । विहान र साँझको समयमा भने बजारमा मानिसहरु बढी देखिने गरेका छन् ।
मौसमपूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीनदेखि तातो हावा लु चल्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ । तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम बढ्नु यो प्राकृतिक कुरा भयो । न यसलाई रोक्न सकिन्छ न त छेक्न । तर यहीसमयमा भइरहेको अनियमित विद्युत कटौतीले भने नेपालगन्जबासीलाई थप सास्ती दिएको छ ।
उज्जयालो अभियानका अभियान्त भनिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङविरुद्ध अनियमित विद्युत कटौतीले पारेको असरको विरोध भइरहेको छ । उनले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको बताउने गरेका छन् ।
तर नेपालगन्जमा दैनिक चार पाँच घण्टासम्म वत्ति जाने गरेको छ । उखरमौउलो गर्मीले आक्रान्त भएका नेपालगन्जबासीलाई घरभित्र बस्नै मुश्किल परेको छ ।
वत्ति भएपनि लो भोल्टेजका कारण फ्यान राम्रो सँग चल्दैन् । एसी त झन परको कुरा भयो । नगरबासी भन्छन् कम्तिमा विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरोस । जतिबेला मन लायो त्यतीबेला वत्ती काट्ने गरेका कारण नगरबासी हैरान भएका छन् ।
उनीहरु विद्युत प्राधिकरणप्रति रुष्ट छन् । बजार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ । उद्योग कलकारखाना संचालनमा ठूलो सकस भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । छिनमै बत्ती आउने र छिनमै जाने समस्याका कारण विद्युतिय सामाग्री विग्रने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने रेडिमेट जवाफ दिन्छन् । उनीहरुले गर्मीमा माग बढी हुने र आपूर्ति कम हुने भएकाले समस्या छ । तर उनीहरु लोडसेडिङ भने नभएको बताउने गर्छन् ।
पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
जसलाई राजाले पाले हुर्काए, उनी नै गणतन्त्रवादी भएर काँग्रेसमा छिरे
११:४१ बिहान, साउन १४, २०७७
मानव-मनमा घृणात्मक विचारको विस्तारवाद ! असत्य तथ्यको भ्रामक प्रचारले पुर्याएको क्षति !
१२:२९ मध्यान्ह, अशोज ३, २०७७
संक्रमितको संख्या १ करोड ६ लाख, यस्तो छ सार्क राष्ट्रको तथ्यांक
११:५९ बिहान, असार १८, २०७७